Ho ela velona i Večerníček: Ilay antso maharitry ny seho fahitalavitra Tsheky 55 taona ho an’ny kilonga · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2020 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, bahasa Indonesia, Italiano, Esperanto , Shqip, русский, English
Tamin'ny 2 janoary ny Repoblika Tsheky no nankalaza ny tsingerintaona faha-55 taona an'i Večerníček, iray amin'ny seho fahitalavitra malaza indrindra ao aminy, izay nahazo ny sata fiondrika ary lasa vato lehibe fikasika amin'ny maripanondroana Tsheky.
Tany Tshekoslaovakia, nanome fifantohana manokana ho an'ny tanora ny ideôlôjia komonista, izay mifanaraka amin'ny finoana fa tsy tahaka ireo mitovy aminy any amin'ireo firenena kapitalista tandrefana, fa misitraka fiarovana manokana sy zo ara-kolontsaina tsy manam-paharoa ny kilonga mitombo any amin'ny firenena sosialista. Natao ho mora takatry ny ankizy maro dia maro, tsy ijerena saranga ara-piarahamonina ny boky, filma, fanatanjahantena, lanonana ara-kolontsaina ary ireo endrika hafa fanalana voly.
Ity video manamarika ny fahadimampolo taona nandefasana voalohany an'i Večerníček tamin'ny 2 janoary 1965 ity, no manasongadina ilay mpiantsehatra mitondra ny tantaran'ny fotoana fatoriana mitafy ilay satroka vita amin'ny gazety miakatra ny tohatra. Tsy niova ary lasa ifankafantarana mandritra ny fahazazana ho an'ireo Tshekoslaovaky an-tapitrisany tamin'izany fotoana izany ny hira, noforonin'i Ladislav Simon, sy ny feon'ny zazalahy dimy taona nantsoina hoe Michal Citavý, ary ifankafantaran'ny Tsheky indray amin'izao fotoana. Any amin'ny fianakaviana maro, manamarika ny fotoana fatoriana ihany koa ny fiafaran'ny Večerníček satria mifarana amin'ny fehezanteny diso fantatra manao hoe “Dobrou noc!” (Soava mandry!) ny seho. Indro ny endrika mainty sy fotsy tamin'ny fotoana lasa:
Tamin'ny taona 1999, Nomen'ny siantifika tsheky ny anarana Večerníček ny planeta iray vao hita (nomena ny laharana 33 377).
Ampolony taona maro ny seho no nivoaka isan'andro, nanolotra ny tsara indrindra tamin'ny sarimiaina Tshekoslaovaky, sy sarimiaina vahiny avy amin'ny firenena sosialista hafa. Tamin'ny taona1989, rehefa nifarana ny komonisma tao Tshekoslaovakia, nanomboka namoaka votoaty Tsheky fotsiny ny seho. Ahitana andian-tantara efa lasa manerantany amin'izao fotoana antsoina hoe Krteček (ilay mpitsikilo kely), izay efa lasa iray amin'ireo sariohatra ara-kolontsain'ny Repoblika Tsheky ireo asa mivoaka ao amin'ny seho (fandaharana).